यदि तपाईं एक महान क्यामेराको साथ फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, Cubot X50 नछुटाउनुहोस् Androidsis
नयाँ उच्च-अन्त क्यामेरा स्मार्टफोन, क्युबटबाट X50, अन्तमा आज बिक्री मा जान्छ। यो स्मार्टफोन उच्च रिजोलुसन क्यामेरा र कुनै आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हार्डवेयरको साथ मोबाइल उपकरणको लागि खोजिरहेकाहरूको लागि राम्रो विकल्प हो।
ठूलो सेन्सर सहित टर्मिनल जस्तै, क्युबोट X50 कुनै पनि परिस्थितिमा उत्तम तस्बिर र भिडियोहरू लिन शक्तिशाली क्वाड क्यामेरा सुसज्जित गर्दछ। यससँगको फर्मले सबै खरीददारहरूलाई उत्कृष्ट मुख्य सेन्सर प्रदान गर्न चाहेको छ, एक राम्रो अल्ट्रा-वाइड क्यामेरा, एक शक्तिशाली म्याक्रो र चौथो सेन्सर जो फोटोसेन्सिटिभ भनिन्छ।
1 क्युबोट एक्स The० का प्राविधिक विवरणहरू
2 मिलानको लागि प्रोसेसर
3 र्याम र खाली भण्डारण
4 ब्याट्री सबै दिन पछिल्लो अपरेटि to गर्न
5 मुख्य लेन्सको लागि MP 64 MP MP Samsung सेन्सर
6 जडान र अपरेटि system प्रणाली
7 क्युबोट X50 उपलब्धता
क्युबोट एक्स The० का प्राविधिक विवरणहरू
क्यूबोट X50 a..6,67 इन्च प्यानलको वरिपरि निर्मित छ, फ्रेम सबै स्क्रिन हो, यसमा फ्रेम वा पक्ष वा शीर्ष वा तल हुँदैन। यो दृश्यलाई विचार गर्न एउटा पक्ष हो जुन दायराले यसलाई केहि बनाउँदछ जुन अनुप्रयोग र भिडियो गेमहरूको उपयोगको लागि यसको सबैमा फाइदा लिन्छ।
स्क्रीन २,2.400०० x १1.080० पिक्सलको रिजोलुसनको साथ पूर्ण HD + हो, पक्ष अनुपात २०: is ​​हो र अवलोकन कोणले तपाईंलाई ठूलो चौडाइ दिन्छ। यस बाहेक, सावधान पक्ष भनेको डिजाइन होदुबै अगाडि र पछाडि, एक महत्त्वपूर्ण विवरण।
पछाडि हेर्नुहोस्, क्युबोट X50 यसले विलासी लुक देखाउन फिर्ता एजी गिलास प्रयोग गर्दछ, र a्गले ग्रेडीएन्ट टोन देखाउँदछ जब फोनमा सूर्यको किरण प्राप्त हुन्छ। यस एजी गिलासको साथ, तपाईंले फिंगरप्रिन्टहरू र smudges को बारे मा चिन्ता गर्न आवश्यक छैन गर्भग्रस्त नहुनुहोस्। यो कालो र हरियो दुई रंगमा उपलब्ध छ।
मिलानको लागि प्रोसेसर
El क्युबोट X50 हेलियो P60 चिप भित्र एकीकृत गर्दछ मिडियाटेकबाट, एक अष्टा-कोर प्रोसेसर चार 73GHz कर्टेक्स A2 कोर र दुई 53GHz कर्टेक्स A2 कोरहरू सहित। पछिल्लो अनुप्रयोगहरूको साथ अधिक क्षमताको लागि प्रयोग गरिन्छ, थप खपत वास्तवमै कम हो र मध्यम अनुप्रयोगहरूको साथ राम्रो प्रदर्शन गर्दै।
ग्राफिक सेक्सनमा नयाँ स्मार्टफोनबाट क्युबोटसँग माली-जी MP72 MP3 एमपीटी जीपीयू 800०० मेगाहर्ट्ज छ, प्रदर्शन मार्केटमा सबै भन्दा नयाँ खेलहरू सहित अनुप्रयोगका सबै प्रकारको साथ ध्यान दिएर छ। यो सबै प्रकारका अपरेशनहरूको लागि पर्याप्त छ र प्रदर्शन विभिन्न टेस्ट बेन्चहरूमा उल्लेखनीय छ।
र्याम र खाली भण्डारण
Cubot X50 एक फोन हो जुन सबै प्रकारका अनुप्रयोगहरू सार्न सक्दछ र्याम मेमोरीलाई मानकको रूपमा स्थापना गरिएकोमा धन्यवाद, मोड्युल 8 जीबी हो। दुबै सुरू गर्न र अनुप्रयोगहरू सुरू गर्न यो अतिप्रवाही हुनेछ र यसले थोरै प्रयासको साथ एन्ड्रोइडको पछिल्लो संस्करणहरूसँग काम गर्ने ग्यारेन्टी गर्दछ।
थप रूपमा, नयाँ स्मार्टफोनसँग १२128 जीबी भण्डारण छ, तपाईंको सबै फोटोहरू, भिडियोहरू र महत्त्वपूर्ण कागजातहरू राख्न पर्याप्त ठाउँ भन्दा बढि। क्वाड क्यामेराको साथ एक मोबाइल र उचाइ सेन्सरसँग धेरै जानकारीहरू भण्डारण गर्न भण्डारण हुनुपर्‍यो।
ब्याट्री सबै दिन पछिल्लो अपरेटि to गर्न
प्रयोगकर्ताहरू सँधै प्रदर्शनको लागि फोन खोज्दैछन् र यो एक ब्याट्री को लागी सबै दिन को लागी यसलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुन को लागी आवश्यक छ। सामान्य प्रयोगको लागि उत्तम जस्तै कल गर्न र कलहरू कल गर्दा जब केहि घण्टा बिना कुनै आपत्‌को अपरेट गर्दछ।
यसले ,,०० एमएएच ब्याट्री समावेश गर्दछ, एक चार्ज भन्दा एक घण्टा भन्दा बढीको चार्जको लागि यो चार्जर मार्फत जानुविना एक दिन भन्दा बढी हुनेछ, निस्सन्देह यो एक विशेषता हो यदि यदि तपाई एक शक्तिशाली ब्याट्रीको साथ उच्च प्रदर्शन फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने। को Cubot X50 जस्तै अरूले छिटो चार्ज एकीकृत गर्दछ र सक्षम हुन को लागी पनि खडा छ एन्ड्रोइड 11 को लागी धन्यवाद।
मुख्य लेन्सको लागि MP 64 MP MP Samsung सेन्सर
शक्तिमा बाहिर खडाको साथसाथै, फोटोहरू लिदा X50 यसको आफ्नै प्रकाशसँग चम्किन्छ जब sens5मेगापिक्सेलको मुख्य सेन्सर सैमसंग S1KGW64 को रूपमा आरोहण गर्दा। यो बाहेक उच्च गुणको फोटोहरूले पनि पूर्ण HD मा भिडियो रेकर्ड गर्न विकल्प दिन्छ र उच्च रिजोलुसनमा भिडियोहरू।
क्युबोट एक्स also० पनि तीन अन्य सेन्सरले लगाएको छ, दोस्रो एक अल्ट्रा-वाइड १ 16 मेगापिक्सेल एकाई हो, साथको पहिलो यो उत्तम कोणमा छविहरू लिनको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तेस्रो5मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स हो र बजारमा अन्य धेरै मध्य-दायरा फोनहरू भन्दा उत्तम छ।
अन्त्यमा, यो चौथो सेन्सरको उल्लेखनीय छ, यो ०.ap मेगापिक्सल हो, कम प्रकाशमा क्याप्चर बाहेक यसले यसले महत्वपूर्ण सुधार गर्दछ, जुन तपाईंलाई रातमा भएको याद नगरी फोटो खिच्न अनुमति दिनेछ। यदि तपाईं धेरै उज्यालो ठाउँहरूमा हुनुहुन्छ यो माथि उल्लेखित तीन लेन्सहरूका लागि पूर्ण समर्थन हुनेछ। यसले मोडलाई "सुपर नाईट मोड" समावेश गर्दछ, कम प्रकाश अवस्थाहरूमा सबै प्रकारका छविहरू क्याप्चरका लागि उत्तम।
Cubot X50 स्मार्टफोन एक 4G उपकरण हुनेछ Helio P60 समावेश गरेर, यसले Wi-Fi, ब्लुटुथ, GPS र NFC जस्ता अन्य कनेक्टिभिटी थप गर्दछ। यसमा हेडफोन पोर्ट छ, यद्यपि ब्लुटुथ वायरलेस हेडफोनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दा बढी सहज हुँदै।
X50 सफ्टवेयरको नयाँ संस्करणको साथ आउँदछ, एन्ड्रोइड ११ को साथ बुटहरू र नयाँ प्रणाली अपडेटहरू, यसैले यसलाई तपाईलाई सुरक्षित बनाउँदछ जब यो ब्राउजिows र फोनको रूपमा प्रयोग गर्न आउँदछ। शुद्ध संस्करण हुनुले यसलाई छिटो टर्मिनल बनाउँदछ र निर्माताबाट बिभिन्न अद्यावधिकहरूको आशा राख्दै।
क्युबोट X50 उपलब्धता
क्युबोट एक्स Global० ग्लोबल बिक्री आज मे १ 50 देखि सुरू हुन्छ १$। .169,99. को छुट मूल्यमा। छूट मूल्य मे १ May देखि मे २० सम्म सुरु हुनेछ आधिकारिक Aliexpress स्टोर। यदि तपाईं फोटोग्राफी उत्साही हुनुहुन्छ वा कोही शक्तिशाली क्यामेरा फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, ध्यान दिनुहोस् क्युबोट X50.
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » यदि तपाईं एक महान क्यामेराको साथ फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, क्युबोट एक्स 50 लाई नहेर्नुहोस्
Mibro रंग स्मार्टवाच, समीक्षा, विनिर्देशन र मूल्य
एन्ड्रोइड मा सबै भन्दा राम्रो निद्रा अनुप्रयोगहरू